Daraasad: Kala xulashada iskuulada waxay kordhisaa faquuqa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Waalidiinta waa ay ka wareegtaan iskuulada ku yaala meelaha ay ku noolyihiin bulshada kala duwan Foto: Ingvar Karmhed
Daraasad: Kala xulashada iskuulada waxay kordhisaa faquuqa
La daabacay onsdag 27 februari 2013 kl 10.20
Daraasad ay soo si wadajir u soo saareen jaamacada Stockholm iyo tan Uppsala ayaa tilmaamaysa in xulashada xorta ee waalidiinta ku doortaan iskuulka ay doonayaan in ubadkooda uu wax ka barto, ay taasi kaabeyso in uu sii kordho faquuq kala duwanaansho oo ardayda ah.
Bishan ayaa guud ahaan dalka waxaa ka socda diyaargarowga xulashada iskuulada ee waxbarashada fasalka toddobaad ee ardayda iyada oo fooda inagu soo heyso sanad dugsiyeedka deyrta.
Laakiin waalidiin badan ayaa doorbidaya in caruurta aysan aadin iskuulada ay ku badan yihiin ardayda ka soo jeeda bulshooyinka kala duwan xitaa haddii iskuulka uu yahay mid halka uu ku noolyahay ubadkooda, sida uu sheegayo Professor Bo Malmberg oo wax ka dhiga kulliyada dhaqanka ee jaamacadda magaalada Stockolm.
– Dadka ugu badan ee iskuulada kala xusho waa qoysaska dabaqada dhexe. Waxayna inta badan ay ka wareegaan in caruurtooda aysan waxba ka dhigin iskuulada ay ku badan yihiin ardayda ka soo jeeda jinsiyado kala duwan, ayuu yiri Professor Bo.
Bo Malmberg ayaa ku soo bandhigay waqti kooban daraasad loogu magac daray ’’Juqaraafiga cusub ee iskuulka Iswiidhan’’ oo ay jaamacadiisa la sammeysay mida Uppsala waxaana daraasada su’aalo lagu weydiiyay 5000 oo qoys oo ku kala nool degmooyin sideed gaaraya, iyada oo qoyskaka la weydiiyay sababta ka dambeysa kala xulashada iskuulka.
Sida uu sheegay Malmberg, jaawabta caadiga ee ay bixiniyaan qoysaska su’aalaha la weydiiyay ayaa inta badan la xiriirtay dhowaashaha iskuulka xaalada deegaanka uu ku yaallo iskuulka balse qoysaska ku nool meelaha sida aadka loo deganyahay ee bulsho kala duwan ku nooshahay sida magaalooyinka waaweyn, qoysaska uma arkaan in muhiimad ay leedahay fogaashaha iskuulka ay u dooraan ubadkooda.
– Markii la weydiiyo waalidka xulashada iskuulka, waxay inta badan ku andacoodaan in tayada iskuulka ay udub dhexaad u tahay xulashada iskuulka laakiin Professor Bo ayaa sheegay markii arrinta si faah faahsan loo faa’qido, tayada laga hadlayo ayaa inta badan ah mid ku qotonta ardayda asal ahaan kala duwan.
Dadka su’aalaha la weydiiyay ayaa waxaa ka mid ah waalid ku nool degmada Uddevala oo xaafada ay degantahay ay kaabiga ku heyso deegaan ay ku badan yihiin dad isir ahaan kala duwan waxuuna waalidkani uu ka baaran degaya in gabadh uu dhalay uu iskuul ugu dalbo meel ka fog halka ay ku nooshahay inkastoo goobtaasi uu ku yaallo iskuul.
hooyadan ayaa xitaa doonaya in gabdha addrress-keeda guriga ay u warrejiso halka uu ku yaallo iskuul ay la dooneysa in ay dhigato si ay ugu hesho boos waxbarasho iskuulkaasi.
– Aabahey ayaa degan meel u dhow iskuulka aan dooneyno in gabadheena ay aado marka xitaa waxaan ka fakareynaa in aan wareejino ciinwaankeeda si ay boos ugu hesho iskuulka aan la rabno, ayay tiri hooyada.
Mar la weydiiyay waxa wel welka ku hayo ee gabadheeda aysan ula rabin iskuulka u dhow ayay sheegtay in uabdkeeda aysan ka heli karin kaalmada ay u baahntahay iskuulka u dhow waayo bay leedahay waxaa ku badan arday aan si wanaagsan u fahmi karin afka Iswidhishka kuwaasi oo waqti badan ka qaadanaya macalimiinta.